Ogaden News Agency (ONA) – Bishan dhamaatay waxaa lagu qaaday cadawga weerara badan oo khasaare laxaadleh loogu gaystay
Bishan dhamaatay waxaa lagu qaaday cadawga weerara badan oo khasaare laxaadleh loogu gaystay
Wararka naga soo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo Khadhaadh ka dheceen deegaano ka mid ah dalka Ogaadeeniya. Weerarada ay qaadeen bishan gudaheeda ayaa aad loogu naafeeyay cadawga taasoo keentay inay meela badan ka gurtaan ciidamada cadawga iyo maxaysatada la socota. Dagaalada ilaa hadda na soo gaadhay warbixinadooda ayaa u dhacay sidan;
29/01/2013 Tuulada Lagu magacaabo Bali-wiriir oo katirasan Shilaabo weerar ay halkaasi ku qaadeen cutub katirsan NH/CWXO fadhiisin ay cadawga ku lahaayeen halkaa iyo maxaysatada la socota ee dhufayska u ah askarta ayaa waxaa weerarkaasi lagaga qabtay 14 askari halka intii kalana ay cagaha waxkadayeen, waxaana lagaga furtay 25qori, rasaas iyo saanad milatari aad utirabadan.
Weerarkan ay ku qaadeen NH/CWXO fadhiisinka cadawga ayay ciidamada JWXO si dhibyar kula wareegeen goobtii fadhiisinka u ahayd dabaqoodhiga hawaarinta.
Sida uu u sheegay warbaahinta af hayeenka JWXO mudane Cabdulqaadir Xasan Hirmooge (Caddaani) waxa ay ka yeelaan dabaqoodhiga lagu qabto goobaha dagaalka ayaa yidhi “maleeshiyaadka lagu qabto goobaha dagaalka ee ka barbar dagaalama askarta wayaanaya uma naqaan maxaabiis dagaal, balse marka la kala saaro askarta lagu qabto dagaalada, kuwa soomaalida ah waxaan u samaynaa dhaqan celin’ Ayuu yidhi mudane Caddaani af hayeenka ururka ONLF.
27/01/2013 dagaal ka dhacay meesha lagu magacaabo Farjano oo Dhuxun ka tirsan waxaa askarta wayaanaha lagaga dilay 1Askari waxaana lagaga dhaawacay 2kale.
27/01/2013 dagaala ka dhacay Deegaaka lagu magacaabo Xidhay oo Fiiq ka tirsan ayaa waxaa gumaysiga lagaga dilay 1 Askari waxaana lagaga dhaawacay 1kale.
26/01/2013 Deegaanka lagu magacaaabo Maygaage oo Fiiq udhow dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay waxaa ciidamda mooraalka jabasan ee gumaysiga Ethiopai lagaga dilay 7 Askari waxaana lagaga dhaawacay 10 kale.
23/01/2013 Deegaanka lagu magacaabo kuuscowl oo Fiiq ka tirsan dagaal ka dhacay ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 3 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4kale.
18/01/2013 Cutub ka tirsan NH/CWXO ayaa kamiin ay ka xidheen meesha lagu magacaabo Cag oo Danood udhow waxaa soogalay gaadiid gumaysi waxaana halkaasi lagu gubay hal Baabuur iyo Askartii saarnayd oo aan waxba kabixin.
Waxaa iyaguna jira dagaalo xoogan oo ka kala dhacay 29,24,25,21,19 Deegaanada kala ah Fadhiweyne oo Haarcad katirsan, Gumurta, Gol-roob iyo Habaaswayne oo Galaalshe kawadatirsan, Garbaxariir oo Shilaabo udhow, Galaalshe, Dhiita oo Awaare ka tirsan iyo Buurta xaajiga oo Fiiq ka tirsan dagaaladaasi ayaa cadowga lagu gaadhsiiyey khasaare xoogan oo Naf iyo hantiba leh.